Man United oo ay heysato ‘Labo daran mid dooro’…..(Jose Mourinho vs Ryan Giggs) – Gool FM
(Manchester) 08 Maajo 2016. Louis Van Gaal ayaa ka tagi kara kooxda Man United marka uu dhammaado kal ciyaareedkan waxayna u badan tahay inuu xilkaa ku wareegi doono tababarihii hore ee Chelsea Jose Moruinho.
Laakiin sida ay sheegeyso Daily Mirror, Giggis ayaa isaga tagi kara kooxda uu waqtiga dheer ku qaatay ee Red Devils waa haddii uu yimaado macallinka reer Portugal ee Mourinho.
Waxay wararku soo jeedinayaan in ninka reer Wales uu ka fikirayo inuu sii joogo Old Trafford amaba uu meel cusub ku biyo shubto.
Wuxuu kol horeba caawiye ahaan uga soo hoos shaqeeyay David Moyes iyo macallinka iminka ee Van Gaal, waxaana jirta suuro galnimo inuu isaga tago kooxda uu ku soo qaatay 20-ka sano waa haddii uu yimaado Special One.
Waxaa la maleynayaa in saaxiibada Ryan Giggs ay kula taliyeen saaxiibkooda inuu layliyo koox intii uu macallimiin kale ka hoos shaqeyn lahaa.
Giggs ayaa ku guuuleystay 13-jeer Premier League intii uu ku sugnaa kooxda reer England.
Man United ayaa nooleysay rajadeeda kaalinta afaraad ee horyaalka kaddib 1-0 ay kaga adkaadeen kooxda Norwich oo ay kula ciyaareen Carrow Road waxaana looga mahdinayaa Juan Mata oo goolka dhaliyay.
Red Devils ayaa la ciyaari doonta kooxda West Ham maalinta talaadada kaa oo go’aan wayn ka qaadan kara kaalinteeda afaraad, waa haddii caawa laga badiyo amaba bar-baro lagu celiyo kooxda Man City oo la ciyaareysa Arsenal.
Kabtan Vincent Kompany oo xaqiijiyey inuu seegayo tartanka Euro 2016